Home » ebook » Free eBook: Ọzụzụ & Nutrition Insider Nzuzo maka a na-ejide onwe ya
Anyị na-enye onyinye eBook maka ndị na-agụ akwụkwọ anyị! Ịnwere ike ibudata Ọzụzụ Nlekọta na Nri Na-edozi Nri maka Ahụm Aka, site n'aka Mike Geary (a $ 17.99 uru) kpam kpam!
Nke a bụ Mike Geary, onye bụ Onye Nkụzi Ọkụ na Onye Nlekọta Nutrition. Akwukwo akwukwo a bu ihe juputara na 27 nke metabolism-na-ewuli ihe omimi nke i nwere ike iji nyere aka wepu aru gi. Akwụkwọ a nwere ọtụtụ atụmatụ ịme ahụ na usoro ịzụta ihe oriri iji gbasaa abụba anụ ahụ ma buru ozu gị n'ogo ọzọ. Pịa ebe a ma ọ bụ njikọ dị n'okpuru iji lee akwụkwọ ma ọ bụ nri pịa chekwaa iji chekwaa eBook a na kọmputa ma ọ bụ mbadamba. Enwere ike ịkọrọ ndị enyi gị na ndị òtù ezinụlọ akwụkwọ a.